सेयरधनीहरुलाई १७५ प्रतिशत हकप्रदको यो अवसर ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > विशेष > सेयरधनीहरुलाई १७५ प्रतिशत हकप्रदको यो अवसर !
सेयरधनीहरुलाई १७५ प्रतिशत हकप्रदको यो अवसर !
काठमाडौ । जनरल फाइनान्स लिमिटेडले एक सय ७५ प्रतिशत अर्थात एक बराबर एक दशमलव सातको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बुधबार १६ औँ, १७ औँ, १८ औँ, १९ औँ र २० औँ गरी पाँच साधारणसभा एकैपटक सम्पन्न गर्दै फाइनान्सले हकप्रद निष्काशनको निर्णय पारित गरेको हो ।
त्यस्तै साधारणसभाले अन्य कुनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा गाभ्ने/गाभिने तथा एक्विजिसन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ ।
संस्थागत सुशासन कायम नभएर वित्तीय संकटमा परेपछि फाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन बर्षअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । कतार स्थित गैरआवसीय नेपालीहरुले फाइनान्स किनेर संचालन गर्ने प्रस्ताव गरेपछि राष्ट्र बैंकले फाइनान्सलाई गत मंसिर २७ गते समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाएको थियो ।
कम्पनीमा सर्वसाधारणको ४० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । हाल फाइनान्सको चूक्ता पूँजी २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १७५ प्रतिशत हकप्रद जारी गरेपछि फाइनान्सको चुक्तापुँजी ८१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।
२०७४ जेष्ठ १० गते १५:५७ मा प्रकाशित
माईक्रोफाईनान्सको ५० प्रतिशत हकप्रदका लागि बुक क्लोजको मिति याद गर्नुहोस् !
भोलि काठमाडौ उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड पहिरो रोक्न तीव्र रुपमा काम अघि बढ्दै
फेरि आयो थप जिल्लाका प्रावि तहको नतिजा (ताजा अपडेट)
बोको हरामद्धारा नाइजेरियामा एकै परिवारका ५ महिला सहित ९ अपहरित
कुनै पनि बहानामा द्वन्द्वमा जानहुन्नः राष्ट्रपति भण्डारी